Poolisiin ajjeechaa shamarree Haayimaanot Badhaadhaaf warra shakkaman afur to’achuu beeksis
HomeAfaan OromooPoolisiin ajjeechaa shamarree Haayimaanot Badhaadhaaf warra shakkaman afur to’achuu beeksis
(BBC Afaan Oromoo) — Komishiiniin Poolisii Magaalaa Finfinnee shakkamtoota afur ajjeechaa shamarree Haayimaanot Badhaadhaa kan Kolleejjii Fayyaa Hospitaala Xuqur Anbassaatti digrii lammaaffaa barataa turte keessaa harka qaban jedhe to’annaa jala oolchuu beeksiise.
Shamrree kun Kollejjii Fayyaa Hospitaala Xiqur Anbassaatti digrii lammaaffaa barataa kan turte yoo ta’u, guyyaa Wiixata, Caamsaa 25, 2020, hojii qorannootiif laaboraatoorii keessa turte keessatti ajjeefamte.
Poolisiin magaalaa Finfinnee ibsa galgala kana fuula feesbuukii isaarratti maxxanseen akka beeksiiseetti, namoota yakka ajjeechaa shamarraa kanarratti raawwatan irratti xiyyeeffannaan qorannoo gaggeessuun seeratti dhiyeessuuf hojjataa jiraachuu himeera.
Haaluma kanaanis namoonni ajjeechaa kanaan shakkaman afur to’annoo jala oolfamusaaniis ibseera.
Shabarree Haayomaanot guyyaa Wiixataatti mooraa hospitaalichaa keessatti laaboraatorii gamoo bulchiinsaarratti argamu keessatti qorannoo gaggeessaa bakka turteetti ajjeefamuushee Komishiniin Poolisii kun beeksiise.
Haata’u malee, erga haala sukkaneessaa ta’een qaamashee irra bakka garaa garaa meeshaa qara qabuun waraanamteen booda guyyaa Kibxataa Caamsaa 26, 2020 sa’aatii 11 irratti reeffi ishee kutaa keessatti argamuu ibseera.
Bilbilli harkaafi meeshaaleen gara biraa shamarree kanaas fudhatamuu qorannoon bira gahamuufi namoonni yakka kanaan shakkaman afran to’ataman irratti qorannoon cimee itti fufuus ibsichi dabalee himeera.
Shamarree kun digrii ishee jalqabaa Yunvarsitii Teeppii irraa qabxii olaanaadhaan erga eebbifamteen booda yunivarsitichuma keessatti barsiisaa kan turte yoo ta’u, barnoota digrii lammaffaa isheetiif gara Koolleejjii Saayinsii Fayyaa Xiqur Anbassaa galuun barnoota ishee hordoffaa osoo jirtu yakki kun irratti raawwatame.
Yakka shamarree kanarratti raawwatame qorachuun ummataaf ifa kan taasisuu ta’u kan hime Komishiniin kun, maatiifi hiriyoota isheetiifs jajabina hawweera.
Ajjeechaa Suukanneessaa Haadha Ilmaan Afurii irratti Ona Laaloo Assaabii keessatti Raawwatame | RSWO
Ibsa ejjannoo Qeerroo Gujii fi Team Mataa Dhiiraa irraa kenname